Ungawulalela kanjani umsakazo online kunoma iyiphi idivayisi | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | Abadlali, Ukusakaza
Njengamanje konke noma cishe konke kwenzeka kwi-intanethi. Ngenxa ye-intanethi singalalela noma iyiphi ingoma esiyifunayo, bukela isiqephu sakamuva sohlu lwethu oluthandayo noma ama-movie wokuqala akamuva. Singakwazi futhi ukufinyelela imishini yendabuko, omagazini kanye ngisho nasemsakazweni wempilo yonke.
Ngokufika kwe- izinsiza zokusakaza umculo, imisakazo ibone ukuthi ibhizinisi labo eliyisisekelo liwa kanjani kancane kancane. Abantu bafuna ukulalela izingoma abazithandayo, ngaphandle kwezikhangiso futhi ngaphandle komethuli okumele enze paripe ngaphambi kokuyifaka.
Enye yezinzuzo ze-intanethi, ezihlobene nomsakazo, ukuthi isivumela ukuthi silalele iziteshi esizithandayo kusuka kwikhompyutha yethu, ngaphandle kokusebenzisa imisakazo yethu yonke impilo, imisakazo ebonakala kuphela bayabamba Ama-40 noma iRadio 3.
Futhi, kulabo abanenhlanhla, noma ngeshwa, ukuhlala phesheya noma ukuchitha isikhathi eside, kuyindlela enhle yokugcina usesikhathini nezindaba ezivela ezweni labo ngaphandle kokuthi phendukela kuthelevishini yesathelayithi.
Indlela esheshayo yokufinyelela eziteshini zethu esizithandayo ngqo ngewebhusayithi yabo. Kepha kukhona impilo engaphezulu kweziteshi zempilo yonke. Ngenxa ye-intanethi, singakwazi thola iziteshi ezivela kwezinye izifunda noma amazwe ezihambelana nalokho esikuthandayo, izidingo zethu noma esikuthandayo.
Ama-Smartphones okuqala aqaliswe emakethe, kuhlanganiswe i-chip ye-FM, i-chip evumela ukulalela umsakazo wendabuko (basebenzisa ama-headphone njenge-antenna). Ngeshwa, kubonakala sengathi abakhiqizi babheja kancane kulo msebenzi yize kusiza kakhulu lapho izinhlekelele zemvelo zenzeka futhi iziteshi ezinkulu zokuxhumana ziyekile ukusebenza.
1 I-Radio Garden
6 Umsakazo we-Intanethi
7 Ezinye izindlela
I-Radio Garden ingenye yezinsizakalo zewebhu ezithandwa kakhulu futhi eziphelele zokulalela iziteshi zomsakazo ezivela emhlabeni wonke. Uma isiphequluli sethu sivumela amakhasi e-web ukufinyelela indawo yethu, izosikhombisa iziteshi eziseduze kakhulu esimweni sethu, okungahle kubonakale kuwubuwula, akunjalo.
Ngokuya ngendawo esikuyo, izophakamisa izindawo eziseduze lapho iziteshi zitholakala khona, yize izophinda futhi yenze ukusesha kwezifundazwe nakwamanye amazwe. Uma isiteshi esisifunayo singatholakali, singakwazi gcwalisa ifomu elizofakwa kule sevisi.
Uma silazi igama lesiteshi esifuna ukusilalela, singangena kuso siye ngqo esiteshini. Uma lokhu kungenjalo, futhi sifuna ukulalela, ngokwesibonelo, noma yisiphi isiteshi eVenezuela, singakwazi hambisa umhlaba wonke uye ezweni bese uchofoza amachashazi ahlukene aluhlaza amele imisakazo yezwe.
I-Radio Garden nayo iyatholakala ngendlela ye- uhlelo lokusebenza lwe-iOS ne-Android, isicelo esingasilanda mahhala ngezixhumanisi ezilandelayo.
Umthuthukisi: Radio Garden BV
TuneIn ingenye yezinsizakalo ezaziwa kakhulu ze- lalela umsakazo we-intanethi kunoma yiliphi izwe. Kusivumela ukufinyelela iziteshi zemisakazo ezingaphezu kwezingu-100.000 XNUMX emhlabeni wonke ngezikhangiso, yize singakhokha imali nyangazonke ukugwema izikhangiso futhi ngengozi sikwazi ukujabulela imidlalo yeNFL, MLB, NBA neNHL.
Inenani elikhulu leziteshi zolimi lweSpanishi, zombili eSpain naseLatin America, yize izilaleli zalo ezinkulu zise-United States, lapho singalalela khona inani elikhulu leziteshi ezweni lonke. Nathi singakwazi lalela i-podcast efanayo esingakuthola kunoma iyiphi enye ingxenyekazi.
Iyahambisana nakho kokubili Ama-Amazon Echo njenge Ikhaya le-Google kusuka kuGoogle ngaphezu kokutholakala kuzipikha zabakhiqizi Sonos. Iphinde itholakale kuzo zombili i-iOS ne-Android, izinhlelo zokusebenza ongazilanda mahhala ngezixhumanisi ezilandelayo.
I-TuneIn Radio: Izindaba, Ezemidlalo ne-AM FM Stations
Umthuthukisi: I-TuneIn Inc
Akusikho isidingo iziteshi eziseSpain, I-RadioFy isevisi oyifunayo. I-RadioFy isinikeza isikhombimsebenzisi esilula lapho kufanele sibhale khona igama lesiteshi esifuna ukusilalela noma ukupheqa kulo ikhasi size sithole isiteshi esifuna ukusilalela, lapho kuboniswa khona okuthandwa kakhulu.
Ama-Radiowebsites isibonisa inkomba yamazwe lapho singalalela khona iziteshi zomsakazo, ngakho-ke kuyindlela enhle kakhulu ongayibheka uma ufuna iziteshi ezivela emazweni athile. Ngokuchofoza ezweni ngalinye, singena kwiwebhusayithi yezwe lapho singafinyelela khona eziteshini ezitholakala kulelo zwe elithile.
iTurn yamir elinye lamakhasi ewebhu asivumelayo finyelela iziteshi zomsakazo cishe kuwo wonke amazwe emhlabeni. Lapho nje usungena kwiwebhusayithi yakho, izoboniswa iziteshi zomsakazo zezwe esikulo. Ngakwesobunxele, singakhetha uma sifuna ukukhombisa kuphela iziteshi emphakathini noma esifundeni sethu.
Uma uthanda ama-podcast, naku-myTurner uzothola izinhlobonhlobo eziningi, kufana ncamashi nesingakuthola kunoma iyiphi enye ingxenyekazi ye-podcast. Futhi iyatholakala kumadivayisi eselula ngendlela yohlelo, ngakho-ke uma singenayo ikhompyutha esiseduze, singasebenzisa i-smartphone noma ithebhulethi yethu.
i-myTuner Radio evela eSpain online
Umthuthukisi: Ukuqanjwa kabusha - Umsakazo, ama-Podcast, Imidlalo
Kepha uma esikufunayo ukulalela ezinye iziteshi, thola izingoma ezintsha, lalela ezinye izinhlobo zomculo, akukho kulokhu okungenhla okusisebenzelayo (ngokuqhathaniswa) njengoba kwenza i-Internet Radio. Ngokusebenzisa Umsakazo we-Intanethi Singalalela iziteshi zomsakazo ngokohlobo lomculo abasakazayo, hhayi ngegama lesiteshi noma ngendawo okuyo.
Ngokushesha nje lapho ufinyelela kuwebhu, izinhlobo ezithandwa kakhulu ziyakhonjiswa. Lapho uchofoza kulezi zinhlobo, zizoboniswa zonke iziteshi ezinikeza lolo hlobo lohloboKungakhathaliseki ukuthi i-polka, i-funk, i-soul, i-Tejano, i-anime, ezothando, i-chill, i-trance, i-ambient, umdanso, i-jazz, i-blues, idwala lakudala, izwe, insimbi, i-salsa, i-hip hop ...
Njengoba sibona izinketho zokuthola izingoma ezintsha esisinikezwa yi-Internet Radio, ngeke sizithole eziteshini zendabuko zanoma yiliphi izwe. Uma sithola isiteshi esisithandayo, singakwazi landa uhlu .m3u ukuyikhiqiza kabusha kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza oluhambisanayo ngaphandle kokusebenzisa iwebhusayithi.
I-Inthanethi igcwele izinsizakalo ezisivumela ukuthi silalele iziteshi esizithandayo. Uma phakathi kwezinketho ezahlukahlukene engikukhombise zona kule ndatshana, awukwazi ukuthola isiteshi osifunayo, mhlawumbe ayikho. Ungabe usaqhubeka, ngoba lezi zinsizakalo zitholakala kakhulu kunazo zonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Abadlali » Ungalalela kanjani umsakazo oku-inthanethi kunoma iyiphi idivayisi
HONOR SmartLife: Konke okwethulwe yiHonor ukuvuselela ikhathalogi yayo